तम्घासमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरु : आत्मरक्षाका लागि खेलकुद महत्वपूर्ण ! – ebaglung.com
२०७६ असार २८, शनिबार ०६:१५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
मनु सुनार, गुल्मी २०७६ असार २८ । तम्घासमा राष्ट्रपति खेलकुद महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयाजना तथा गुल्मी जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संयोजन तथा व्यवस्थापनमा अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरु भएको हो । पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराधहरु बढीरहेको अवस्थामा छात्रा (महिला)हरुलाई आत्मरक्षाका लागि अभिवृद्धि तालिम शुरु गरिएको हो ।
गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सञ्चालन भईरहेको अभिवृद्धि तालिमको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीले उद्घाटन गर्दैे अन्यन्त्र जिल्लाको तुलनामा गुल्मी जिल्लामा खेलकुदमा महिला सहभागीता बढी रहेको बताए ।
जिल्लालाई खेलकुदको रुपमा विकासका लागि महिलाहरुको पनि उल्लेखनीय योगदान रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारील महिलाहरुले पनि जिल्लालाई स्वर्ण पद्क जिताएको बताए । उनले जिल्लामा खेलकुदमा छात्रा (महिला) हरुको सहभागीता बढी गराएको बताए ।
‘जिल्लाका महिला खेलाडीहरु शारीरिक, मानसिक, नैतिक, अनुशासित रुपमा अब्बल छन् उनले भने, यसले खेलकुद सँगै खेलाडीको जीवनस्तर महत्वपुर्ण बन्ने बताए । साना बालिकाहरुमाथि पनि बलात्कार जस्ता अपराध हुने गरेकाले उनीहरुको रक्षाका लागि खेलले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिकी सदस्य कमला घर्तीले खेलकुदले व्यक्तिको सम्पुर्ण तबरले विकासका लागि सहयोग पु¥र्याउने बताईन भने प्रशिक्षक रोम दाहालले खेलले व्यक्तिको आत्मरक्षा गर्ने बताएका थिए ।
साँसद पौडेललाई आफ्नै बोली गलपासो : सामाजिक सञ्जालको हाँसो ! जिल्लाबासीको प्रश्न,साँसद ज्यू, बहुमतको सरकार, ठेकेदार भन्दा कमजोर हुँदो रैछ हो ?